के तपाइँ दाँत ब्रस गर्दा यस्ता गल्ती गर्नुहुन्छ ? जान्नुहोस् ब्रस गर्ने सही समय र तरिका – Ramailo Sandesh
के तपाइँ दाँत ब्रस गर्दा यस्ता गल्ती गर्नुहुन्छ ? जान्नुहोस् ब्रस गर्ने सही समय र तरिका
व्यक्ति कुराकानीमा कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने कुरालाई फरक पार्दैन, तर सासको गन्धले उसको आत्मविश्वासलाई कम गर्दछ।यसको लागि सब भन्दा सामान्य कारण ब्रशिंगको साथ सम्बन्धित केहि सामान्य गल्तीहरू हुन्।एक व्यक्तिले दैनिक रूपमा ब्रश गर्दछ, तर दाँतको सुन्दरता र स्वास्थ्य कायम राख्न, दिनको कति पटक ब्रस, कति समयसम्म ब्रस गर्दछ, कस्तो मन्जन प्रयोग गर्दछ ? यस सवालबाट अनजान बन्छ ।
जुन केही समयपछि श्वासको गन्ध र कमजोर दाँतको कारण समस्या उत्पन्न हुन्छ । यस्ता समस्याबाट छुटकारा पाउन, ब्रशिसङगको सही तरिका के हो भनेर थाहा पाउनुहोस्।
दैनिक ब्रसको गर्दाको फाइदाहरू
दैनिक ब्रस गर्दा दाँत फाट्ने समस्या उत्पन्न हुँदैन।
दैनिक ब्रस गर्दा दाँतमा कैविटी हुँदैन।
गिजासँग सम्बन्धित रोगहरूको जोखिम कम छ।
मुखको क्यान्सरको जोखिम पनि कम छ।
कति लामो समयसम्म ब्रस गर्दा राम्रो हुन्छ
अमेरिकी दन्त चिकित्सक संघका अनुसार व्यक्तिले दिनमा २ पटक ब्रस गर्नु पर्छ। ब्रस गर्ने समय २ मिनेटको हुनुपर्छ।२ मिनेट भन्दा कमको लागि ब्रस गर्दा दाँतमा प्लेक हटाउँदैन। यो २ मिनेट भन्दा बढी दाँत रगड्दा पनि दाँतको इनामेल खराब हुन्छ ।
तपाईको टुथब्रस कस्तो छ ?
दाँत सफा गर्न सँधै नरम ब्रस्टलको वाला टुथब्रस प्रयोग गर्नुहोस्। कडा ब्रस्टलवाला ब्रसले दाँत को इनामेल खराब मात्र गर्दैन, गिजासँग सम्बन्धित समस्या पनि उत्पन्न गर्दछ ।
मन्जन कस्तो प्रयोग गर्ने ?
ब्रस गर्न तपाईले टूथपेस्ट वा मन्जन प्रयोग गर्नु पर्छ जसमा सही मात्रामा फ्लोराइडको मात्रा हुन्छ, त्यो हेर्नुपर्दछ ।
वयस्क मानिसले प्रयोग गर्ने मन्जनमा १३५० पीपीएम फ्लोराइड र ६ बर्ष भन्दा कम उमेरको बच्चामा १००० पीपीएम फ्लोराइड हुनु पर्छ। ३ देखि ६ वर्ष उमेरका बच्चाहरूले मटरको दाना बराबर टुथपेस्ट प्रयोग गर्नुपर्दछ।
ब्रस गर्ने सही समय
दन्त चिकित्सकहरूले एक व्यक्तिलाई दिनको २ पटक बिहान र सुत्ने अघि दाँत माझ्न सल्लाह दिन्छन्। साथै, याद राख्नुहोस् कि कुनै पनि प्रकारको एसिडिक खाना वा पेय पदार्थ खाएपछि तुरुन्तै ब्रस नगर्नुहोस्। दाँतको तामचीनी एसिडको कारण कमजोर हुन्छ र ब्रस गर्दा यो हटेर जान्छ ।
हरेक समय थकाइ र निद्रा किन लाग्छ ? जान्नुहोस् १० कारण र बच्ने उपाय